Fepetran'ny fitsangatsanganana ataon'ny firenena sy ny faritra araky ny UNWTO
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Fepetran'ny fitsangatsanganana ataon'ny firenena sy ny faritra araky ny UNWTO
Vaovao Mafana Espaniola • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Tatitra momba ny fameperana ny dia amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
Ny UNWTO dia ao ambadiky ny fotoana rehefa namoaka tatitra vaovao momba ny fameperana ny fitsangatsanganana ataon'ny firenena sy ny faritra androany izy ireo. Ny mpiara-miasa amin'ny fikarohana UNWTO dia manolotra bokikely namboarina tsara tarehy eTN mpamaky afaka misintona.
Ny tatitra vaovao dia mampiseho tarehin-javatra marina tamin'ny 1 Jona. Iray volana mahery lasa izay ary talohan'ny nanafihan'ny COVID-19 ny valin'ny Delta ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany
"Miova tsy an-kijanona ny fameperana ny fitsangatsanganana ataon'ny firenena sy ny faritra ary ny tatitra navoakan'ny governemanta UNWTO dia tsy hahatratra ny fotoana mahamety azy", hoy i Juergen Steinmetz, filohan'ny World Tourism Network (wtn.travel)
Araka ny fanontana farany an'ny Travel Restrictions avy amin'ny Countries and Regions Report avy amin'ny Masoivoho manokana an'ny fizahan-tany an'ny Firenena Mikambana, hatramin'ny 1 Jona, 29% amin'ireo toerana rehetra maneran-tany dia mihidy tanteraka amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Amin'ireny, mihoatra ny antsasaky ny no nakatona tanteraka ho an'ny mpizahatany hatramin'ny Mey 2020 na mihoatra, miaraka amin'ny ankamaroan'ny an'ny State of Development Island kely any Azia sy Pasifika.
Raha ampitahaina, toerana telo fotsiny (Albania, Costa Rica, Repoblika Dominikanina) no misokatra tanteraka ho an'ireo mpizahatany, tsy misy fameperana intsony izao.
Ny fanolorana vaksiny eran-tany sy ny fampitomboana ny fandraisana ny vahaolana nomerika amin'ny fivezivezena soa aman-tsara dia tokony hitarika fiakaran'ny fivezivezena iraisam-pirenena mandritra ny herinandro sy volana ho avy, hoy ny angona farany avy amin'ny World Tourism Organization (UNWTO).
Iray amin'ny telo (34%) ny toerana rehetra dia mihidy ampahany, ary 36% mangataha valiny fanandramana COVID-19 ratsy amin'ny fahatongavanao, amin'ny tranga sasany miaraka amina fepetra takiana amin'ny quarantine. Ny angon-drakitra dia manamafy ny fironana mankany amin'ny toerana itadiavana olona maro loko, ny fomba fiasa mifototra amin'ny porofo sy ateraky ny risika amin'ny dia lavitra, indrindra amin'ny hazavana misy ny toe-javatra epidemiolojika sy ny fisian'ny karazana virus vaovao. 42% n'ny toerana rehetra no nampiditra fetra voafaritra manokana ho an'ireo mpitsidika amin'ny toerana itadiavam-bidy manomboka amin'ny fampiatoana ny sidina sy ny fanidiana ny sisin-tany ka hatramin'ny quarantine voatery.
Ny fameperana fitsangatsanganana ataon'ny firenena sy ny faritra dia mety ho hafa be ary hiova amin'ny fotoana rehetra. Ny tatitra UNWTO navoaka dia efa iray volana mahery, ary efa nisy ny fanovana lehibe ary tokony hokarohin'ny mpitsangatsangana sy ny matihanina amin'ny dia.
Tsindrio eto raha hampidina ny tatitra feno. (PDF)
Ankoatr'izay, satria ny ankamaroan'ireo toerana itodiana ireo miaraka amin'ny fepetra henjana dia manana ny taha ambany indrindra amin'ny vaksiny, ny angon-drakitra koa dia manondro fifandraisana eo amin'ny hafainganam-pandehan'ny vaksiny sy ny fanalefahana ny fetra. Raha ampitahaina, ireo toerana itodiana izay manana taha ambony amin'ny vaksiny sy toerana ahafahan'ny firenena miara-miasa fitsipika sy protokolola mirindra toy ireo miasa ao amin'ny faritr'i Schengen ao amin'ny Vondrona eropeana, dia tsara toerana kokoa mba hamelana ny fizahan-tany hiverina miadana.
Mbola misy ny tsy fitoviana isam-paritra mikasika ny fameperana ny dia. Ny 70% amin'ireo toerana rehetra aleha any Azia sy Pasifika dia mihidy tanteraka, raha ampitahaina amin'ny 13% fotsiny any Eropa, ary koa ny 20% any Amerika, 19% any Afrika, ary 31% any Moyen Orient.
Fanombanana ireo fepetra takiana ankehitriny ho an'ny mpandeha vita vaksiny, 17% amin'ireo toeran-kaleha rehetra manerantany no milaza manokana ireo mpandeha vita vaksiny ao amin'ny lalàna mifehy azy ireo. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia mitohy ny fameperana ny dia amin'ny mpandeha vita vaksiny feno (izay nahazo vaksiny roa vaksinina nankatoavina), na izany aza, amin'ny hafa, esorina daholo ny fameperana. Manantena ny UNWTO fa hivoatra be izany mandritra ny herinandro ho avy.
Ny tatitra dia manondro fa ny famerenana indray ny fizahan-tany maneran-tany dia hijanona ho moana raha mbola manome torohevitra ny governemanta hatrany. Ny efatra amin'ireo tsena loharano 10 ambony dia manome torohevitra hatrany ny olom-pireneny tsy handehanana any ivelany (ireo efatra ireo dia niteraka 25% n'ny fahatongavan-tany rehetra tamin'ny taona 2018).
Tatitry ny Firenena Mikambana momba ny fameperana ny dia Misintona maimaim-poana (PDF)